Ingabe i-demo idayisa indlela efanele ngaphambi kokuthi 'ukuhweba kwangempela' futhi uma kunjalo ngusiphi isikhathi sithutha ukuhweba kwedemo? | | Ibhulogi ye-FXCC
Apr 29 • Phakathi kwemigqa • Ukubuka kwe-8152 • Amazwana Off Ngabe i-demo ihweba indlela efanele ngaphambi 'kokuhweba kwangempela' futhi uma kunjalo ngusiphi isikhathi sithutha ukuhweba kwedemo?
Kunamathuluzi amaningi awusizo kakhulu abathengi bethu abasinikezayo okuvame ukusetshenziselwa ukusetshenziswa, ukusetshenziselwa kabi, noma ukungazinaki futhi i-akhawunti ye-demo ingenye yokunikeza okukhululekile. Kungaphansi kokusetshenziselwa abathengisi abaningi ababekezeleke kakhulu ukuthuthela ekuhwebeni kwangempela futhi ngenxa yalokho sebenzisa i-demo okwesikhashana ukuze uhambisane nokungapheli ekuhwebeni kwangempela. Kusetshenziselwa kabi abadayisi abaningi abahluleka ukubona ukubaluleka kweqiniso kwama-akhawunti we-demo uma kusetshenziswa kahle; ngakho-ke bahlukumeza ama-akhawunti ukucabanga (ngokungalungile) ukuthi akukhathaleki ngokuthi "akuyona imali yangempela". Futhi ekugcineni nje kunganakiwe njengendlela yokukhetha nabathengisi abaningi abahluleka ngokuphelele ukuqaphela ama-akhawunti amaningi angabonakali futhi angacacile ama-demo we-demo kanye nokuhweba kwe-demo okungaba ngaphezu kokubonakala okusobala ukuthi kunendawo yokuqhuba ukuhweba.
Ukuhweba nge-akhawunti ye-demo kusiza abathengisi ukuba bazijwayele ngamapulatifomu abadayisi
Uma usanda kushayisana ukuhweba ke-ke ubunzima obunzima balo bhizinisi bungaba nzima kakhulu ngezikhathi ezithile. Kulula kakhulu ukukhumbuza futhi ucabange emuva (kusuka endaweni yokuphumelela nesipiliyoni) ukuthi wonke amakhono esiwadingayo ukuze sithengise ngempumelelo afika nathi kalula. Kodwa-ke, iqiniso liwukuthi inqubo yokufunda yelulelwe isikhathi eside. Siye sazikhohlwa eziningi zamaphutha ayisisekelo esizenzile futhi lokhu ngaphambi kokuba sixoxisane ngokuzijwayeza ngesipulatifomu esisha ngokuphelele.
Ngisho noma ngabe singabathengisi abanolwazi, sicabangela ukuhambisa ama-akhawunti ethu kumthengisi wethu wamanje kumthengisi omusha, kufanele sicabange ukusebenzisa inguqulo ye-demo yamapulatifomu wangempela ngaphambi kokuhweba ngezimali zangempela. Uma usujwayelene kakhulu nesikhulumi somthengisi othize singasithatha isikhathi sokungenelela endaweni yesikhulumi esisha futhi ezinye zeziphambeko eziyisisekelo esingazenza zingase zibe yindleko uma singaphumeleli ukuthi sifunde kanjani ukuthi izinselele zesikhulumi esisha zisebenza kanjani. Kuningi okumele ufunde, kusukela ekusebenzeni kwe-oda namakhono ayisisekelo wokuphatha, ku-layout jikelele futhi 'ukuzwa' kwesikhulumi esisha.
Amasu okuhlola ngesikhatsi eside kanye namaqhinga okuhlola ngenkathi ukuhweba kuphila
Uma singumthengisi omusha, noma umhwebi ophumelelayo nolwazile ukuzama ukuhlola amasu amasha, amapulatifomu e-demo angabonakala ayigugu njengoba nje siphila singasasebenzisa ipulatifomu yethu yokuhweba ye-demo ngempumelelo. Abathengisi abaningi bayoba nokungaziphendulela nokuzifunela kwengqondo ukuhweba kukhathazekile ngakho-ke kuzobe njalo befuna ukuthuthukiswa okuncane kanye nokulungiswa kwesuhlelo lwabo lwamanje. Noma ngibheke ukuze ubone ukuthi indlela yokuhweba ehluke ngokuphelele ingase isebenze ngokuvumelana nalokho abasebenzisa manje. Isibonelo, singase sibe ukuhlolwa kwe-scalper ngaphandle kokukwazi ukuqhuba izinqubo zokuhweba zethando eceleni kwendlela yethu yokwehla, noma singase sibe ngumphathi ophumelelayo we-swing efuna ukubona ukuthi ukulungiswa okuncane yini lapho sibeka khona imiyalo yethu; okufakiwe, ukuthatha imiyalo yokunciphisa inzuzo kanye nokuyeka, kungaba nomthelela wangempela emgqeni wethu ophansi. Kuzo zonke izimo ama-akhawunti we-demo angabonakala ewusizo.
Hamba kuphela bukhoma uma sinomlando ojulile wokuthola inzuzo ku-akhawunti yethu ye-demo ngaphezu kwamasonto noma izinyanga, ungapheli amandla
Ukuhweba kwi-demo akusilungiseleli ngempela ukucindezeleka kokuhweba kungakhathaliseki ukuthi sithatha ngokungathí sina kangakanani ukuhweba kwethu kwe-demo nokuthi sihlonipha kanjani, ngemuva kwezingqondo zethu siyazi ngokuqondile ukuthi akukho 'imali esendleleni '. Ngenkathi singakwazi ukulingisa izindlela zokuhweba eziqondile esiziqashisayo kwi-demo 'ezweni langempela lokuhweba' futhi sithole ukwaneliseka ngokwenza umsebenzi ngokufanele, ngokulandela uhlelo lwethu lokuhweba kwimodi ye-demo ngokuqondile, akukho lutho olungasilungiselela ngempela ukuvezwa kwangempela komzwelo ukuhweba kunikezela. Ngokucacile, izinselelo ezingokomzwelo ze-FX kanye nezinye zokuhweba ezinikezwayo zihlukile futhi kunzima ukuphinda ziphendule kunoma yimuphi omunye umsebenzi. Futhi kudingeka sikhumbule ukuthi ngisho nalapho 'siphila bukhoma', imizwelo esiyithola phakathi kokudayisa i-akhawunti ye-$ 25 ne-akhawunti ye-$ 25k izohluka ngokuphelele. Ngakho-ke kuvame ukuphakanyiswa ukuthatha izinyathelo ezinganeni ezweni lokuhweba kwangempela emva kwedemo futhi uthengisa izinkampani ezincane / mini ngokukhipha inkatho egcwele ekuqaleni.
Ukuyigcina kwangempela, hhayi ukuhlala 'ku-demo-land' isikhathi eside kakhulu
Ekugcineni ne-demo yokuhweba sisuke sithengisa emakethe ehlanganiswa kakhulu engase ingabi njengemakethe yangempela. Futhi kungakhathaliseki ukuthi umthengisi wethu usetha kanjani i-akhawunti ye-demo ukuze afane futhi abuyele esibukweni sendawo yangempela yokuhweba kungenzeka ukuthi i-akhawunti ye-demo ngeke isebenze njenge-akhawunti evamile. Ngaphezu kwalokho, ukuziphatha kwethu nesimo sengqondo ngokuqondene ne-akhawunti ye-demo ngeke kulandele indlela esenza ngayo ngokoqobo. Ngenkathi siyazi ukuthi akubuhlungu uma sinokulahleka kuma-platforms wokuhweba we-demo, akukho lutho olusifundisa isisindo ngokushesha kunokulahlekelwa imali futhi ngezindlela ezithile ukusheshisa esiya kuleso simo kungcono, kodwa kuphela uma singu-100% isu lethu lokuhweba kanye necebo lokuhweba.
Zama ukwenza i-akhawunti ye-demo ilandise iqiniso lethu
Uma sivula i-akhawunti yethu ye-demo sizonikezwa izinketho ezithile ngokuphathelene nesamba sokuhweba esingasisebenzisa, ngokuvamile kusuka ku-10K kuya ku-100K. Kukhona iphuzu elincane kakhulu ekukhetheni inani lokuhweba le-50K uma sizohwebelana ne-10K uma sesikulungele ukuhamba bukhoma. Kufanele sisebenzise i-akhawunti ye-demo ukuze iphinde iphinde ibe yiyona nkathi yangempela yokuhweba esiyifisa ukwenza okwenzeka. Ngaleyo ndlela sizobe senza isinyathelo esisodwa kuphela ekuhwebeni kwangempela, ukuhweba ngemali yangempela. Lolu shintsho luzoba lula kakhulu ukuthi sinesici esisodwa sokugxila ngokugcwele.
Ukwenza inzuzo kudemo akuqinisekisi izinzuzo ezifanayo nge-akhawunti yangempela
Imakethe ayinandaba ukuthi siphumelele futhi siphumelele emuva kokuhlolisisa isu lethu emuva eminyakeni emithathu ku-demo, noma ukuthi siye sahlolelwa phambili ezimweni 'ezibukhoma' isu lethu lokuhweba amasonto ayisithupha noma izinyanga futhi sithathwe ukuthi inzuzo yayo okusebenzayo. Uma siphila futhi sithengisa ngezimali zangempela (kodwa ngokuthobekile ekuqaleni) imakethe ingashintsha futhi ibenze ibhuloho lesandla ngokuzumayo lisivimbela ngokuphelele thina kanye necebo lethu lokuhweba. Ngamafuphi, iningi lethu elizosizwa lizofakazela, akukho okuqinisekisiwe kuleli bhizinisi ngaphandle kokungalindelekile. Ukuhlola izinkolelo zethu ngokusebenzisa ama-akhawunti wethu we-demo nakanjani kuzosenza sibe nomthengisi oqeqeshwe futhi oqeqeshiwe, ngeke kuqinisekiswe ukuthi impumelelo, noma kunjalo, ukuphathwa nokusetshenziswa kahle kwama-akhawunti we-demo kungabonakala iyithuluzi eliyigugu kwizinto zokuzivikela zamathuluzi mahhala. sinikeza umthengisi wethu.
« Ukuthengiswa kwezindlu okulindelekile kukhula e-USA ngaphezu kokulindelwe ngenkathi i-USA isebenza izigwebo ezingaphezulu ezibhekiswe eRussia Izintengo zasendlini e-USA zisakhula nakuba zihamba kancane njengoba inkomba yokuthembela kwabathengi iwela kancane »